Tababare Zidane Iyo Real Madrid Oo La Ogaaday Wakhtiga Kama Dambaysta Ah Ee Ay U Qabsadeen Saxeexa Pogba & Tirada Maalmaha Ka Hadhay. - Gool24.Net
June 17, 2019 Apdihakem Omer Adem
Waxa wali halkooda kasii socda wararka hubaanti la’aanta ka dhigaya mustaqbalka khadka dhex ee kooxda Manchester United ee Paul Pogba kaas oo xiise weyn ka helaya kooxda ree Spain ee Real Madrid.
Pogba ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay oo dhan soo ahaa bar-tilmaameed Madrid ah balse warkaas ayaa halkiisii ugu sarreysay gaadhay kaddib hadal rasmi ah oo shalay kasoo yeedhay Pogba qudhiisa.
Pogba oo haatan wakhti ku qaadanaya dalka Japan ayaa sheegay inuu aaminsan yahay inay tahay wakhtigii ku haboonaa ee uu samayn lahaa isbedel isla markaana uu bilaabi lahaa loolan cusub.
Haddaba, Sida laga soo xigtay MARCA, Real Madrid oo uu hor kacayo Zinadine Zidane ayaa si weyn u xiisaynaya inay 26 jirkan kusoo xoojiyaan safkooda xilli ciyaareedka dambe iyaga oo wakhti kama dambays ah u qabsaday saxeexiisa.
Wakhtiga ay Madrid doonayso inay iska dhammaystirto saxeexa Pogba ayaa ah ugu dambayn 1-da bisha July oo ay haatan ka hadheen 13 maalmood waana isla maalinta ay xiddigaha Man United kasoo laaban doonaan fasaxooda.
Los Blancos ayaa og in helista Pogba aysan ahayn wax sahlan oo aysan Manchester si fudud ku fasaxayn isla markaana wakhtiga ay qabsadeen uu yahay mid kooban balse hadalka kasoo yeedhay Pogba ayaa ah midka kalsoonida ku abuuraya.
Dhinaca kale iyadoo kooxda Juventus ay ahayd mida kaliya ee saxeexa Pogba kula tartamaysay Real Madrid ayay haatan Juve u muuqataa mid ka hadhay tartankaas waxaana ay saadaasha ugu badani sheegaysaa in Paul uu xilli ciyaareedka dambe ka ciyaari doono Bernabeu.